सुस्मिता सेनको यस्तो जवाफ जसले ऐश्वर्या राईलाई पछि पारिन - Bichar news - Nepali Online News Portal
सुस्मिता सेनको यस्तो जवाफ जसले ऐश्वर्या राईलाई पछि पारिन
कला र मनोरञ्जन, मुख्य खबर, रोचक, समाचार
काठमाडौँ। सुस्मिता सेनले १ नोभेम्बरमा आफ्नो जन्मदिन मनाउँछिन्। १९९४ मा, सुस्मिताले फेमीना मिस इण्डियाको उपाधि जितेकी थिइन्। उहीँ वर्षमा उनलाई मिस युनिभर्शका लागि चुनिएको थियो। त्यस समयमा उनको उमेर १८ वर्षको मात्र थिइन्।​ सुस्मिताले मिस युनिभर्शको उपाधि जित्न लामो यात्रा गरेकी थिइन्।
सुस्मिता सेन र ऐश्वर्या राई दुवैले मिस इंडिया प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। यो प्रतियोगिता गोवामा आयोजना गरिएको थियो। दुवै मिस इण्डिया जित्ने कडा प्रतिस्पर्धी थिए।यति मात्र होइन, सुस्मिता आफैंले पनि विश्वास गर्छिन् कि ऐश्वर्या आफूभन्दा अगाडी छिन्। किनभने उनी धेरै सुन्दर छिन्। मिस इण्डियाको अन्तिम राउन्डमा सुस्मिता र ऐश्वर्याबीच टाई रहेको भएको थियो।
सबै धडकन त्यस समयमा बढेका थियो। न्यायाधीशले ती दुबैलाई ९.३३ नम्बर दिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्ने निर्णय गरियो। जसको उत्तर राम्रो छ, उसैले मिस इण्डियाको उपाधि जित्ने पक्का छ। न्यायाधीशले ऐश्वर्यालाई यो प्रश्न सोधे, तिमी आफ्नो पतिमा के हेर्न चाहन्छौ?बोल्ड र सुन्दर रिज फोरस्टर वा मैसन क्यापवेल।
जवाफमा ऐश्वर्यले भनेकी थिइन्, माइसन। हामी दुबैमा धेरै चीजहरू समान छन्। माइसन धेरै हेरचाह गर्ने छ र उनको हास्य भावना धेरै राम्रो छ। त्यो मसँग मेल खान्छ। तपाईंले जान्नु पर्ने कुरा के भने रिज फोरस्टर र माइसन क्यापवेल दुबै हलिउड श्रृङखलाका चरित्रहरू हुन्।
अब सुस्मिता सेनलाई प्रश्न गर्ने मेरो पालो आएको थियो। उनलाई सोधिएको थियो, तपाईलाई आफ्नो देशको टेक्सटाइल विरासतको बारेमा के थाहा छ? यो कहिले सुरु भयो? तिमी के लगाउन चाहन्छौ?
उनले भनेकी थिइन्, मलाई लाग्छ यो महात्मा गान्धीको समयबाट शुरू भयो। यो धेरै लामो समय बितिसकेको छ। मलाई भारतीय र परम्परागत लुगा लगाउन मन पर्छ। म मेरो वार्डरोबमा भारतीय पोशाक राख्न चाहन्छु। यो जवाफका कारण मिस इण्डियाको ताज सेनले जितेकी थिइन्।
- २ मंसिर २०७७, मंगलवार १५:४९ मा प्रकाशित